REPUBLICADAINIK | कृषिमन्त्री भुसाल ज्यू यही हो तरिका ? - REPUBLICADAINIK
कृषिमन्त्री भुसाल ज्यू यही हो तरिका ?
काठमाडौं । मन्त्री बन्नु अगाडि घनश्याम भुसालले दिएका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले धेरै महत्व पाउने गरेका थिए । मन्त्री भएपछि भुसालको ती अभिव्यक्तिहरू आउनै छाडेका छन् ।
कृषि मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि भुसालले कृषिमा आमूल परिवर्तन ल्याउने गरेर काम गर्छन् कि भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो । तर, मन्त्री भुसालबाट ती अपेक्षाहरूको एकपछि अर्को गर्दै निर्मम तरिकाले हत्या भइरहेको चर्चा हुन थालेको छ ।
मन्त्रालयमा बसेर उनले दिनभरि के गर्छन् ? भनेर आहिले प्रश्न उठ्न थालेको छ । आफूलाई भेट्न आउने पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूसँग उप्परखुट्टा लगाएर गफगाफभन्दा अरु केही कार्य गर्न नसकेको भनेर भुसालको आलोचना भइरहेको छ ।
आश गरिएका मन्त्रीबाटै निराशा हुने कार्यहरू हुन थालेपछि भुसालकाे आलाेचना हुन थालेकाे छ । कतिपयले काम गर्न नसक्ने हाे भने राजीनामा दिन सुझाव पनि दिन थालेका छन् ।
आर्थिक वर्ष ०७७–७८ को बजेटमा पनि कृषि मन्त्रालयबाट त्यति राम्रा कार्यक्रमहरू आउन सकेन । मन्त्री भुसालले बजेटमा कौशलता देखाउन सकेका छैनन् । धेरैको आशालाई भुसालले निराशामा बदलिदिएका छन् ।
लकडाउनका कारण देशभरिका किसानहरूले खेतबारीमा लगाएको तरकारी बाली नष्ट भइरहेको छ । विभिन्न जिल्लाहरूमा किसानहरूले तरकारी नष्ट गरिरहेका छन् । किसानहरू यसरी समस्यामा पर्दा समेत मन्त्री भुसालले हस्तक्षेपकारी नीति लिन सकेका छैनन् ।
अर्को भाषामा भन्ने हो भने मन्त्री भुसाल झण्डै दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकारका एकजना निरिह मन्त्री हुन पुगेका छन् ।
मन्त्री हुनभन्दा अगाडि भुसालका जसरी आदर्शका कुराहरू आउने गरेका थिए । ती सबै खोक्रो आदर्श रहेछ भनेर आलोचना हुन थालेको छ ।
Published : Tuesday, 2020 June 2, 11:39 am
काठमाडौं उपत्यकामा ११० जनामा कोरोना, शुक्रबार देशभरि ४६४ संक्रमित
काठमाडौं उपत्यकामा दुई हप्ता अत्यावश्यकबाहेकका सेवा बन्द
कोइराला–पौडेललाई गुटका कार्यकर्ता बचाउन तनाब, सिटाैला मालामाल
कारबाही गर्नुपर्ने विदेशी मान्छेसँग कम्युनिस्ट सरकारका मन्त्री गुरुङको हिमचिम